Waxa lagu booqdo Veracruz, Mexico | Wararka Safarka
Susana Garcia | | America, Mexico
La Magaalada Veracruz Waa tan ugu muhiimsan gobolka Veracruz de Ignacio de la Llave. Magaalo sidoo kale fure u ah xagga ganacsiga, maadaama ay leedahay mid ka mid ah dekedaha ganacsiga ugu muhiimsan ee Mexico. Dakad sidoo kale ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, maadaama aan ka hadlayno magaalo uu aasaasay Hernán Cortés qarnigii XNUMXaad.
Maanta magaalada Veracruz ayaa weli ah fure u ah ganacsiga, laakiin sidoo kale waa magaalo ku faaneysa dalxiiska. Meel firfircoon oo leh xeeb weyn oo leh xeeb xeebeed iyo waliba magaalo madadaalo leh oo aan waxbadan ka qaban karno. U fiirso wax walba oo aad ku arki karto magaalada Mexico ee Veracruz.
1 Baro Veracruz
2 San Juan ee ulua
3 Madxafka wax
4 Matxafka Naval Mexico
5 Qeybta hoose ee Santiago
6 Aquarium-ka Veracruz
7 Malecón iyo Zócalo
8 Afka Wabiga
Magaalada Veracruz sidoo kale waxaa loo yaqaan Halyeey Veracruz, magaalo ay ka buuxaan sheekooyin la sheego. Dhexdeeda magaaladu waxay la kulantay iska caabintii ugu dambeysay ee Isbaanishka ee qalcaddii San Juan de Ulúa 1825, laakiin waxay sidoo kale la kulmeen Faransiis Dagaalkii Keega iyo Waqooyiga Ameerika. Magaalo caan ku ah iska caabinteeda, goobaheeda taariikhiga ah iyo muhiimadda ganacsi ee dekeddeeda ay wali ku sii socoto. Waxay ku taal qiyaastii 400 kiiloomitir magaalada Mexico City, xeebta Gacanka Mexico.
San Juan ee ulua
Haddii ay jirto meel taariikhi ah oo ay tahay in lagu soo booqdo magaalada Veracruz, taasi waa qalcadda San Juan de Ulúa. Qalcad u adeegtay sidii saldhig bas ah, oo ah haynta biraha qaaliga ah ee ay ahayd in loo diro Spain iyo sidoo kale xabsi. Haddii aad booqanayso, waxaa ugu wanaagsan inaad bixiso hage si aad noogu sheegto gees walba oo ka mid ah qalcadda iyo taariikhdeeda, maadaama ay tani ka dhigayso booqashada mid aad u xiiso badan. Dhexdeeda waxaad ka arki kartaa guriga gudoomiyuhu, halkaasoo Benito Juárez xitaa ku noolaa, laakiin waxaad kaloo arki kartaa qolalka qabow iyo qoyan ee maxaabiista ama Gidaarka Argollas-ka, halkaas oo maraakiibtu ku xirteen.
Mid ka mid ah booqashooyinka ugu qosolka badan ee lagu tago magaalada Veracruz ayaa ah Madxafka wax. Matxafkani wuxuu ku dhow yahay Aquarium-ka, sidaa darteed waxaan ku raaxeysan karnaa galab madadaalo ah oo booqanaya labadan meelood. Gudaha gudahiisa waxaan ku arki karnaa qolal kala duwan oo leh astaamo kala duwan, laga bilaabo heesaha ilaa cayaaraha. Waxaan sawiro ku qaadi karnaa astaamo u dhexeeya Frankenstein ilaa Elvis Presley.
Matxafka Naval Mexico
El Matxafka Badda ee Veracruz Waxay ahayd mid furan illaa 1897, waana macquul in magaalo muhiim ah oo muhiim ah ay ku leeyihiin matxaf la xiriira wax kasta oo badda ah. Matxafkan weyn waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno barxad qurxoon, oo khariidad adduunyo dhulka taal, laakiin waa inaan sidoo kale booqannaa 26 hoolalka bandhigyada joogtada ah ee leh kheyraadka maqalka. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku dalxiis tagno taariikhda badmareenka oo aan wax ka baranno badda hadda jirta iyo isbeddelka maraakiibta ee Mexico.
Qeybta hoose ee Santiago
Meeshan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Baaruud Bulwark. Waa dhisme millatari oo qarnigii XNUMX-aad lahaa aasaasyo badan oo kale si loo ilaaliyo magaalada. Maanta mid kaliya ayaa haray, waana midda la booqan karo, si wax badan looga barto taariikhda difaaca magaalada ee loo yaqaan Heroica. Gudaha waxaa hadda loo isticmaalaa sidii matxaf si loo ilaaliyo Jumladaha Kalluumeysatada, dahabka pre-Hispanic ee qiimaha badan.
Aquarium-ka Veracruz waa soojiidasho weyn oo loogu talagalay dalxiisayaasha, maxaa yeelay waa tan ugu muhiimsan Mexico. Waxay leedahay 250 nooc oo noocyo ah, waxayna ku taalaa Playón de Hornos iyo 80% waa deegaan dabiici ah. Waa goob ku habboon in lala booqdo qoyska, maxaa yeelay madadaalo ka sokow, carruurta iyo dadka waaweyn waxay wax badan ka baran karaan nidaamka deegaanka iyo noocyada aquarium-ka. Hal meel oo qof walbaa doonayo inuu booqdo waa haanta loo yaqaan 'Oceanic Fish Tank', oo ah tunel aad ka arki karto noocyada Gacanka Mexico oo si buuxda ugu milmay deegaanka.
Malecón iyo Zócalo
Waxaa jira laba aag oo ku yaal magaalada Veracruz oo aad dalxiis u ah, kuna habboon madadaalo. Dhinac waa Malecón, aagga dekedda oo marka lagu daro aragtida doomaha taagan waxaad ku raaxeysan kartaa cunno goboleed makhaayadaha ku yaal aagga ama aad ka iibsato wax caadi ah. Zócalo waa meesha kale ee ay tahay inaad ka gudubto, maadaama ay tahay Plaza Duqa magaalada. Bar kulan oo ay ku yaalliin qasriga dowladda hoose iyo kaniisada weyn.
Afka Wabiga Waa magaalo ku dhow bartamaha Veracruz. Haddii aan rabno inaan maalin xasilloon ku qaadanno xeebta aagga oo ka fog magaalada, markaa waa inaan tagnaa Boca del Río. Xeebta Mocambo waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo lagu raaxeysto maalin qoraxdu ku dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Waxa lagu booqdo Veracruz, Mexico
5 soo jiidasho ee Kiev